Madhur Bani मधुर वाणि ! : यो क्षण पनी टरेरै जानेछ ! Article (प्रेरणादायी लेख-9 )
यो क्षण पनी टरेरै जानेछ ! Article (प्रेरणादायी लेख-9 )
'मान्छे अभावमा आतिन्छ र उपलब्धिमा मातिन्छ , आफुलाई नचिने सम्म। सामान्य मानिसका लागि अभाव र उपलब्धि दुबै छटपटि र अस्थिर मनका कारक हुन्। यस्तै छटपटिले दु:खित हुंदा राजा अकवरले वीरवललाई दु:ख निवारणको स्थायी समाधान सोधेको प्रसङ्ग उनिहरूको कथामा उल्लेख छ । "मलाई दु:ख हुंदा र सुख हुंदा दुबै बखत काम लाग्ने कुरा मेरो भित्तामा लेखिदेउ विरवल , ता कि म हरेक दिन आफुलाई त्यो पढे पछि सम्हाल्न सकुं। " विरवलको माथिङलले धेरै सोच्यो । सोच्नु ,एकाग्र हुनु ध्यान गर्नु एक माध्यम हो जसले संसारका सबै रहस्य को उद्वोध गर्छ । यसैले भनिन्छ , प्रार्थना आफ्नो कुरा भगवानलाई सुनाउने माध्यम हो भने ध्यान भगवानको कुरा सुन्ने एक अवसर हो । गहिरो सोचले विरवलाई नयां उपाय दियो । उनले अकवरको घरको भित्तामा एउटा सुन्दर वाक्य लेखिदिए , जुन वाक्य पढेर अकवरको मनमा सांच्चै स्थिरता र सुख प्राप्त हुंदै गयो । विरवलले भित्तामा लेखेको त्यो वाक्य थियो "यो क्षण पनि टरेर जानेछ " ।
यसमा अझ गहिरिऔं , दिन भरमा हामी औषत २१ हजार छ सय पटक श्वास लिन्छौं । जीवन शुरु भएदेखि गरिएको पहिलो कार्य नै श्वास र जीवनको अन्त्यमा गरिने अन्तिम कार्य पनि श्वास प्रश्वास हो । हरेक श्वास हरू अस्थिर छन्। नयां श्वास लिईयो भन्यो , फेरी पुरानो भईहाल्छ । पल-पलमै हाम्रो फोक्सो चल्छ , श्वासलाई लगातार पम्प गर्दै फाल्छ । गहिरिएर हेर्दा यो श्वास नै जीवनको अस्थिरता बोध गराउने आँफैसँग अहओरात्र रहने गुरु हो । भूगर्वविद र खगोलविद वैज्ञानिकहरू हर्मन र साइमानले यो धर्तीको आयू सरदर २२ लाख वर्ष भनेर हिसाव निकालेका छन्। यस्तै ब्रह्माण्डका हरेक पिण्डको आ-आफ्नै आयु छ । अर्थात हरेक वस्तु संसारमा अस्थिर मात्र छन् , यहि अस्थिरता को बोध नै हरेक कर्ममा , व्यवहारमा, सोचमा र चिन्तनमा गर्नुलाई पश्चिममा भन्ने गरिएको 'सेल्फरियलाइजेशन 'र पुर्वमा भनिने निर्वाण वा मोक्षको अवस्था हो ।आत्मा मात्र अमर छ । आफ्नो खप्तड सूक्तिमा खप्तड बाबा लेख्नुहुन्छ "आत्मा सुख दु:ख तथा यिनका भोक्ताको पनि साक्षी हो । अस्थिरता वोध हुनासाथ थाहा हुन्छ "तपांई तत्व दृष्‍टिले उही अजर-अमर , शुद्द -बुद्द , नित्य -मुक्त तुरीय ब्रम्ह हो । " जब यो सत्य को बोध हुन्छ तब हामी नदेखिने भविश्यका लागि भन्दा देखिने वर्तमानका लागि बढी सुखले बांच्छौं । एकैछिन सोचौं -
· सुखका लागि बांच्ने हैन सुखले बांचौं।
· धन अधिक आवश्यक छ तर अधिक धन आर्जन गर्नु भन्दा अधिक बाँच्न सिकौ ।
· राम्रो र स्वस्थ शरीरको लागि प्रयास गरौं ।
· महंगो फोनको ७० % फंकशन अनुउपयोगी रहन्छ ।
· महंगो कारको ७०% गतिको उपयोग हुदैन ।
· *घरको पुरै दराजमा ७०% कपडा त्यतिकै राखिएको हुन्छ ।
· पुरै जिन्दगीको ७०% कमाई अरुको उपयोग को लागि छुट्ने गर्छ ।
· ७०% गुणहरुको उपयोग हुदैन भने 30% गुणहरुको उपयोग कसरी हुन्छ ।
सबै घटना टरेरै जान्छन्, मात्र हरेक पलमा साक्षि भावको विकास गर्दै वांचौं । तपाईं भोक्त्ता हैन द्र्स्टा बन्न सिक्नुहोस। कर्ता हैन साक्षि बन्ने अभ्यास गर्नुहोस्। आनन्दका दैलाहारू विस्तारै तपाईंका लागि खुल्दै जाने छन्। -bhimsensap@hotmail.com
Posted by Sumadhur Chintan (सुमधुर चिन्तन at 08:12
'जिब्रो सुध्रियो भने जीवन सुध्रीनमा समय लाग्दैन' A...
गलत सङ्गत गर्नु भन्दा एक्लै रहनु उत्तम Article (प्...
'ए फुजिको नलजाउ अब ' (कविता -2)